माननीय ज्यू लाटीखोल्सा आसपास खसेको पहिरो सुरूङ मार्ग बनाउँदा हो ? – मिलिजुली खबर
माननीय ज्यू लाटीखोल्सा आसपास खसेको पहिरो सुरूङ मार्ग बनाउँदा हो ?
पछिल्ला केहिदिन यता यो फोटो सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ । काभ्रेको डाँडापारी क्षेत्रमा पर्ने खानीखोला गाउँपालिका पुग्ने खोपासी-ताल्ढुङ्गा सडकको स्याउरेथली-भञ्ज्याङ खण्डको भाग हो यो । पहिरो खसेको ठाउँलाई स्थानीयहरू लाटीखोल्सा भन्छन् । यो क्षेत्र चाहिँ बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मेदान्सु क्षेत्रमा पर्छ ।
यहि लाटीखोल्साको पहिरोमा ज्यान जोखिममा राखेर आवातजावात गरिरहेका छन् खानीखोला गाउँपालिका बासी । र उनीहरूले संघीय सांसद गंगा बहादुर दोङ बमध्वजलाई तालढुंगाको आमसभामा बोलेको भाषण एक पटक सम्झिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
उसै पनि डाँडापारी । हिउँदको समयमा समेत जेन तेन मात्रै सवारी गुड्ने सडक छ । बर्खा लागेपछि के हाल होला । फोटोबाटै दर्दनाक अवस्था थाहा भैहाल्यो । पानी पर्न साथ त्यहाँका नागरिकको मन उसै पिरोलिन्छ । बिरामी परियो भने अस्पताल नपुगी मरिने पो हो की भनेर ।
त्यस क्षेत्रका धेरैले सडकको पहुँच नभएकै कारण अकालमा मृ त्युवरण गरेका छन् । स्थानीय तह बनेपछि । बाम गठबन्धनका उम्मेदवारले जितेपछि त अवस्था फेरिन्छ सोचेका थिए, त्यहाँका नागरिकले । तर अवस्था उस्तै । हिउँदोमा गाडी जनप्रतिनिधि आउनुअघि पनि कुदेकै हुन् । अहिले झण्डै २० वर्षपछि आएका जनप्रतिनिधिले वडा-वडामा, गाउँ-गाउँमा, टोल-बस्तीसम्म सडकको ट्रयाक त खोलेका छन् । तर ती भित्री सडक हिउँदोमा पनि सवारीसाधन गुडाउन योग्य छैन् ।
सायद सांसद भएपछि तपाईले तालढुंगाको भाषण बिर्सिनु भयो होला । तर तपाईलाई भोट दिएर जिताउने र तपाईको भाषण सुन्न पुगेका । न त कार्यकर्ताले बिर्सिएका छन् । न त मतदाताले नै । २०७४ सालको निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा तालढुंगामा भएको सभामा झण्डै ४ हजार खानीखोला गाउँपालिका बासीलाई साक्षी राखेर तपाईले सुनाएको सुरूङ बनाउने योजना सम्झिरहनु भएको छ की खानीखोलामै बगाईदिनु भयो ?
तपाईले भनेका ती शब्द त्यहाँका मतदाताको कानमा अझै ताजै छ । कतिपयले भिडियो नै रेकर्ड राखेका छन् । कतिले अडियो । माननीय ज्यू तपाईले बोलेको शब्द यहि थियो ‘खोपासीबाट ९ मिनेटमा ताल्ढुङ्गा पुग्ने सुरुङ बनाइदिन्छु’। तपाई निर्वाचित भएर सिहंदरबार पुगेको पनि चार बर्ष पुग्नै लागेको छ ।
तपाईलाई कोहि खानीखोला गाउँपालिकाका मतदाताले ‘खोपासीबाट ९ मिनेटमा ताल्ढुङ्गा पुग्ने सुरुङको डिपिआर तयार भयो ? मात्रै भनेर सोधे भने के जवाफ दिनुहुन्छ माननीय ज्यू ? कतिपटक तपाईले संघ सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा राख्न यो सुरूङ मार्ग प्रस्ताव गर्नुभयो ? वा संघ सरकारले पो चाँसो दिएन् की ? यी प्रश्नहरूको उत्तर कहिले पाउँछन् खानीखोला बासीले ।
हो । डाँडापारीबासी तपाईबाट मात्रै होईन । यसअघिका प्रतिनिधिबाट पनि भरपुर ठगिएकै हुन् । र तपाईले पनि त्यहाँका नागरिकका मतलाई मज्जाले अपमान गर्नुभयो । तपाईले भनेको सुरूङ मार्ग बन्न निश्चय नै समय लाग्छ । कम्तिमा तपाईको बाँकी कार्यकालमा केहि कामको त सुरूवात गरिराख्नुस् । अनि अर्को कुरा कतिमा अहिलेलाई लाटीखोल्साको पहिरो हटाउन पहल गरिदिनुस् माननीय ज्यू । यति गरिदिनु भयो भनेपनि डाँडाबासीले तपाईलाई धन्यवाद नै दिनेछन् ।
पहिरोले अरनिको राजमार्गको धुलिखेल-तीनपिप्ले खण्ड अवरुद्ध
बनेपा-पनाैती सडककाे पुण्यमाता पुल क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा समस्या